Dawlada Israa’iil oo Dagaal Kula Jirta Luqadda Carabiga | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Dawlada Israa’iil oo Dagaal Kula Jirta Luqadda Carabiga
Tel Aviv(ANN)Dadka ku dhaqan dalka Israa’ii shantii qof ba mid ka mid ah ayaa luqaddiisa hooyo tahay Carabi, balse waxay ka baqaan dhammaantood in ay goobaha dadku isugu yimaaddaan ku hadlaan, iyagoo ka cabsada in cadaawad loo qaado oo saraakiisha Yuhuudda iyo shacabkuba ku colaadiyaan luqadda, sida lagu sheegay warbixin ku soo saareen kooxo xuquuqal-insaanka u dhaqdhaaqa toddobaadkan.
Qayl-dhaantan ayaa timi kadib markii qareennada amma sharciyaqaanno ay dawladda hoose ee Tel Aviv ugu hanjabtay in ay dambi maxkamadda ka dhan ah galeen (Contempt of Court), haddii ay dacwada ay gudbiyaan laga helo erayo Carabi ah.
Dawladda hoose ayaa calaamado arrintan muujinaysa ku dhejisay goobaha caanka ah ee caasimadda, taasoo 14 sanno kadib raacday amar Maxkamadda sare ka soo baxay oo sheegaya in aan dacwadaha lagu gudbin luqadda Carabiga.
Siyaasadda laga soo saaray magaalada Tel Aviv, waxa ay takoor ku noqotay luqadda Carabiga, maadaama ay ahayd afka labaad ee lagaga hadlo waddanka Israa’iil.
Marka laga yimaad luqadda Hebrew ee Yuhuudda, waxa Carabiga afkooda hooyo ay u tahay 1.7 qof oo asal ahaan Falastiniyiin ah oo ku nool Israa’iil, sida uu sheegay Jamal Zahalka oo ah Falastiini ku jira barlamaanka Israa’iil, waxaannu xusay in tiro aad u yar oo hay’adaha dawladda ah ay soo saraan dukumantiyo aad u tiro yar oo Carabi ah, waxaannu caddeeyey in shirkado badan iyo hay’addo dawli ahba looga digay in shaqaalahoodu Carabi kula hadlaan shaqaalaha amma macaamiisha kale ee aan Carabta ahayn.
Goobaha aadka looga neceb yahay luqadda Carabiga waxa ka mi dah dawladda hoose ee Tel Aviv oo dhiirrigelisa in afka Carabiga loola dhaqmo in ay tahay ajnebi aan dalka laga oggolayn, sida uu sheegay Jamal Zahalka oo ka mid ah Golaha Barlamaanka Israa’iil ee Knesset.
Waxa waqtiyadan u dambeeyey soo baxayey warbixino sheegaya in muwaadiniin Falastiiniyiin ah lagu waxyeeleeyey magaalooyinka Israa’iil deggen tahay oo ay kooxo Yuhuud ah weerareen, kuna dhawaaqaayeen “Dila Carabta.”
Xubno Carab ah ka tirsan Barlamaanka Yuhuudda oo uu ka mid yahay Jamal Zahalka oo xisbiga Balad Party ka tirsan, ayaa Golaha laga mamnuucay, kadib markii ay luqadda Carabiga ku soo jeediyeen xeer ay doonayeen in golaha la horkeeno.
Inta badan ee xubnaha Golaha Barlamaanka Yuhuuddu ma fahmaan Carabiga, isla markaana cid turjuntana ma haystaan, maadaama ay aad uga soo horjeedaan in af-carabigu ku fido degaannada ay deggn yihiin.
Mr. Jafar Farah oo ah qareen Falastiini ah, kana tirsan koox la yidhaa Mossawa oo Golaha Sharci-dejinta uga dooda in ay helaan dadka Carabta ee Isra’iil ku nool xaqa ay u leeyihiin in ay ku hadlaan luqadooda, balse golayaasha sharci-dejinta iyo siyaasaduba aad bay uga soo horjeedaan luqadda Carabiga.
Xog-ururin lagu soo bandhigay shir lagu qabtay Jaamacadda Tel Aviv University bishii December ee 2015, waxa lagu ogaaday in 17% muwaaddiniinta Yuhuuddu sheegaan in ay fahmaan luqadda Carabiga, balse tiradaas ay hoos-u-dhac ku yimaaddeen markii dadka laga codsaday in ay akhriyaan buuggaag Carabi ku qoran.
Mr. Yonatan Mendel oo ah cilmi-baadhe dhinaca luqadaha ku takhasusay, kana tirsan mac-hadka Vaan LKeer Institute oo ku yaal Qasa, waxa uu sheegay in dadka luqadda Carabiga fahmaa ay yihiin dadka Yuhuudda ah ee waaweyn ee ku dhashay dalalka Carabta, balse waqtigan ay meesha ka baxeen.
Sidoo kale, xog-ururin kale oo la sameeyey oo Jamhuuriya soo xigtay, ayaa iftiimisay in 48% dadka Yuhuudda ah ee Israa’iil ku nool ay doonayaan in Falastiniyiinta la degen dalka laga saaro oo la eryo.
Geesta kale, xog-ururinta ayaa sheegtay in afartii Falastiiniyiin mid ka mid ah uu la daala dhaco akhrinta luqadda Hebrew ee Yuhuudda, waxaanay xubnaha ku dhaqan Israa’iil la il darnadaan inay fahmaan ogaysiisyada iyo shuruucda lagu soo rogo dalka, xataa marka masuuliyiintu la hadlayaan si fiican uma fahmaan.